Faa'iidooyinka tamarta dabaysha: astaamaha, isticmaalka iyo qasaaraha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Faa'iidooyinka tamarta dabaysha
Tamarta dabayshu waxay noqotay isha ugu weyn ee dhalinta tamarta si loo beddelo qaabka tamarta, nadiif ah oo waarta. Tiknoolajiyadda la hagaajiyay waxay u saamaxaysaa beeraha dabaysha qaarkood inay soo saaraan koronto qiimo jaban sida dhuxusha ama dhirta tamarta nukliyeerka. Shaki kuma jiro in tamarta aan wajahayno ay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo waxyeellooyinkeeda, laakiin tii hore waxay ku guuleysataa guul weyn. Waana badan yihiin faa'iidooyinka tamarta dabaysha.
Sababtaas awgeed, waxaan u gogol xaaraynaa maqaalkan inaan kuu sheego waxa ay yihiin faa'iidooyinka ugu waaweyn ee tamarta dabaysha ay muhiim u tahay horumarinta tamarta meeraha.
1 Waa maxay
3 Faa'iidooyinka tamarta dabaysha
3.1 Waa tamar aan dhamaanayn waxayna qaadataa meel yar
3.2 Ma wasakhdo oo waxay leedahay qiimo jaban
4 Faa'iidooyin badan oo ka mid ah awoodda dabaysha iyo cilladaha
4.1 Dabayshu maahan wax joogto ah tamarna lama keydiyo
4.2 Saamaynta muuqaalka iyo noolaha
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado waxa tamarta noocan ahi tahay. Tamarta dabayshu waa tamarta laga helo dabaysha. Waa nooc ka mid ah tamarta firfircoonida ee ay soo saarto ficilka socodka hawada. Waxaan u rogi karnaa tamartaan tamar koronto iyadoo loo marayo matoor dhaliyaha. Waa tamar nadiif ah, dib loo cusboonaysiin karo oo aan wasakh lahayn oo kaa caawin karta beddelka tamarta laga helo shidaalka.
Soo saaraha ugu badan ee tamarta dabaysha adduunka waa Mareykanka, waxaa ku soo xiga Jarmalka, Shiinaha, Hindiya iyo Spain. Laatiin Ameerika, soo saaraha ugu weyn waa Brazil. Isbaanishka, tamarta dabayshu waxay siisaa koronto u dhiganta 12 milyan oo guri, taas oo ka dhigan 18% baahida waddanka. Taas macnaheedu waxa weeye in tamarta cagaaran ee ay bixiyaan shirkadaha korontada ee dalku ay ka yimaadaan beeraha dabaysha.
Tamarta dabaysha waxaa lagu helaa iyadoo loo rogo dhaqdhaqaaqa cirifka marawaxadaha tamarta korantada. Marawaxadaha dabayshu waa matoor dhaliyaha ay waddo marawaxadaha dabaysha, iyada oo kan ka horreeyayna uu ahaa mashiinka dabaysha. Marawaxadaha dabaysha ayaa ka kooban munaarad; nidaamka meeleynta wuxuu ku yaalaa dhamaadka munaaradda, dhammaadkeeda sare. Kabadh ayaa loo isticmaalaa in lagu xiro shabakadda korantada ee taawarka hoostiisa; dambiil laadlaad waa xaraf ay ku yaalliin qaybaha mashiinka wax lagu shiido oo u ah saldhigga garbaha; usheeda dhexe iyo rotor-ka waxaa lagu kaxeeyaa afaafka hore; waxaa jira bareegyo, iskudhuflaaqeeyayaal, koronto-dhaliyeyaal iyo nidaamyo lagu hagaajiyo korantada oo ku jirta nacelle.
Baalasha waxay ku xiran yihiin rotor-ka, kaas oo isna ku xiran masafka (oo ku yaal barta birlabta), kaas oo u diraya tamarta wareegga matoor-dhaliye. Generator wuxuu adeegsadaa birlabta si uu u dhaliyo danab, sidaas awgeedna wuxuu dhaliyaa tamar koronto.
Beerta dabaysha waxay u gudbisaa korontada ay soo saarto xarunteeda saldhiga keydka qaybinta iyada oo loo marinayo fiilooyin, tamarta la soo saarayna waxaa la siinayaa xarunta qaybinta ka dibna loo sii gudbinayaa isticmaalaha dhamaadka.
Waxaa jira faa iidooyin badan oo ay leedahay tamarta dabaysha oo aan u kala qaybin doono si aan si faahfaahsan ugu sii faah faahinno.
Waa tamar aan dhamaanayn waxayna qaadataa meel yar
Waa il tamar dib loo cusboonaysiin karo. Dabaylku waa il hodan ah oo aan la koobi karin, taas oo macnaheedu yahay inaad had iyo jeer ku tiirsanaan karto isha asalka ah ee asalka ah, taas oo macnaheedu yahay Ma jiro taariikh uu dhacayo. Sidoo kale, waxaa loo isticmaali karaa meelo badan oo adduunka ah.
Si loo soo saaro loona kaydiyo isla korantada, beeraha dabaysha waxay u baahan yihiin dhul ka yar kan loo yaqaan 'photovoltaics'. Sidoo kale waa la beddeli karaa, taas oo macnaheedu yahay in aaggii ay degeen baarkinku si fudud dib loogu soo celin karo si loo cusbooneysiiyo dhulkii horey u jiray.
Ma wasakhdo oo waxay leedahay qiimo jaban
Tamarta dabayshu waa mid ka mid ah ilaha tamarta nadiifka ah ka dib tamarta qorraxda. Sababta tan ayaa ah in aysan ahayn geedi socod gubasho inta lagu gudajiro jiilkeeda. Sidaa darteed, ma soo saarto gaasaska sunta ah ama qashinka adag. Awoodda tamarta marawaxadaha dabaysha waxay la mid tahay awoodda tamarta ee 1.000 kiilo garaam oo saliid ah.
Intaas waxaa sii dheer, matoorka laftiisa ayaa leh meerto nololeed oo aad u dheer ka hor inta aan laga saarin qashin. Qiimaha dayactirka marawaxadaha dabaysha iyo marawaxadaha ayaa yara hooseeya. Meelaha dabayluhu saaraan, qiimaha kiilowatt ee wax soo saarku aad ayuu u hooseeyaa. Xaaladaha qaarkood, kharashyada wax soo saarka waxay la mid yihiin kuwa dhuxusha ama xitaa awoodda nukliyeerka.
Faa'iidooyin badan oo ka mid ah awoodda dabaysha iyo cilladaha
Tamarta noocan ah waxay la jaanqaadi kartaa howlaha kale ee dhaqaalaha. Kuwani waa dhibic weyn oo ku habboon. Tusaale ahaan, waxqabadyada beeraha iyo xoolaha ayaa kuwada nool si waafaqsan hawlaga beeraha dabaysha. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan saameyn taban ku yeelan doonin dhaqaalaha maxalliga ah, iyo waxay u oggolaaneysaa xarunta inay abuurto ilo dhaqaale oo cusub iyadoo aan la carqaladeynin horumarka howlaheeda soo jireenka ah.
Dhanka kale, sida aad filan karto, dhammaantood ma ahan faa'iidooyinka tamarta dabaysha, laakiin sidoo kale waxaa jira xoogaa faa'iido darro ah. Aynu falanqeyno mid kasta oo ka mid ah:
Dabayshu maahan wax joogto ah tamarna lama keydiyo
Awoodda dabaysha ayaa ah mid aan la saadaalin karin, sidaa darteed saadaasha wax soo saarka had iyo jeer lama kulmo, gaar ahaan qalabka yar ee ku meel gaarka ah. Si loo yareeyo khatarta, maalgashiga xarumaha noocan oo kale ah had iyo jeer waa wakhti dheer, sidaa darteed xisaabinta soo noqoshadeeda ayaa amaan ah. Yaraantaan waxaa sifiican loogu fahmi karaa hal qayb oo macluumaad ah: marawaxadaha dabaysha waxay kaliya u shaqeyn karaan si caadi ah hoosta 10 ilaa 40 km / saacaddii. Xawaaraha hoose, tamartu faa'iido ma leh, halka xawaaraha sare ay ku jirto, waxay u taagan tahay khatar jireed oo ku timaad dhismaha.
Waa tamar aan la keydin karin, laakiin waa in isla markaaba la cuno marka la soo saaro. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan bixin karin beddel buuxa oo ah isticmaalka noocyada kale ee tamarta.
Saamaynta muuqaalka iyo noolaha
Beeraha waaweyn ee dabaysha waxay leeyihiin saameyn dhul oo xoog leh waxaana laga arki karaa meel fog. Celceliska dhererka munaaradda / marawaxadaha waxay u dhexeeyaan 50 illaa 80 mitir, iyo garbaha wareegaya waxaa kor loo qaadayaa 40 mitir oo dheeri ah. Saamaynta bilicsanaanta ee muuqaalka muuqaalka mararka qaarkood waxay u keentaa raaxo la'aan dadka deegaanka.
Beeraha dabaysha waxay saameyn taban ku yeelan karaan nolosha shimbiraha, gaar ahaan kuwa wax kufsada ee firfircoon habeenkii. Saamaynta shimbiraha waxaa u sabab ah taas garbaha wareegayaa waxay ku socon karaan xawaare dhan 70 km / saacaddii. Shimbiraha ayaan muuqaal ahaan ku garan karin baalashleyda xawaarahaan oo ay si ba'an ugula dhici karaan iyaga.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka tamarta dabaysha iyo cilladaha qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Awoodda dabaysha » Faa'iidooyinka tamarta dabaysha
Goorma ayuu saliida dhamaan doonaa